ဘာဖြစ်တာလဲ သိ၀ူး — MYSTERY ZILLION
လုလု သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်ပျူတာ က ဘာမှသုံးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားလို့
ဖြစ်ပုံက ဒီလို...သူ့စက်ကိုဖွင့်တော့ window တော့ တက်ပါရဲ့ start menu ကနေရာမှန်မှာ ပေါ်မလာပဲ တခြား တနေရာမှာသွားပေါ်ပြီး menu ထဲမှာလဲ ဘာမှ မပေါ်တော့ပါဘူး:O
ပြီးတော့ mycomputer ကိုဖွင့်လိုက်တော့ လဲ C: တို့ တို့ က ပုံ မပေါ်ပဲ Local Disk (C) ဆိုတာမျိုးလေးတွေပဲပေါ်နေပြီး ဖွင့်လို့ မရတော့ပါဘူး ....ဒါနဲ့ လုလု ထင်တာ သူက system file တစ်ခုခုများ မှားပြီးဖျက်လိုက်မိသလားလို့ ... ဒါပေမဲ့ လုလုက မရှာတတ်ဘူးလေ လောလောဆယ်သူက အလျင်လိုနေတော့ window ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အဲဒီတော့ကောင်းသွားတယ်....တကယ်တော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူဆိုရင် ဖြေရှင်းနည်းက window တင်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်....ဒါကြောင့် အဲဒါဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုတာ သိတဲ့လူရှိရင် ဖြေပေးကြပါဦးနော်:77:
တားတားဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး virus scan လုပ်ကြည့်မယ်။
window တော့ တက်ပါရဲ့ start menu ကနေရာမှန်မှာ ပေါ်မလာပဲ တခြား တနေရာမှာသွားပေါ်ပြီး menu ထဲမှာလဲ ဘာမှ မပေါ်တော့ပါဘူး
ဘယ်နေရာမှာ ပေါ်တာပါလဲ။ သိချင်ပါတယ်။
Local Disk (C) ဆိုတာမျိုးလေးတွေပဲပေါ်နေပြီး ဖွင့်လို့ မရတော့ပါဘူး
right click နှိပ်ပြီး explorer နဲ့သွားကြည့်ဖြစ်လားမသိဘူး ။ အဲဒီလိုမှ မရရင် window key+E ကိုတွဲနှိပ်ပြီး သွားကြည့်။ ပြီးရင် c ကိုဘေးက အကွက်လေးထဲမှာ click နှိပ်ကြည့်ရင်ပေါ်မယ်ထင်တယ်။ အခုတော့ format ချလိုက်တော့ စမ်းလို့ ရတော့ဘူးပေါ့။
ပုံမှန် Monitor ရဲ့ဘယ်ဘက်အောက် ဒေါင့်လေးမှာ start menu ကပေါ်တယ်မဟုတ်လား
ဒါပေမဲ့ ခုက monitor ရဲ့ ဘယ်ဘက်ထိပ်မှာ ....အကုန်လုံးမပေါ်ဘူး တ၀က်တပျက်
စမ်းကြည့်တယ်...ရဘူး ဖွင့်နည်းပေါင်းစုံလုပ်ကြည့်တာပဲ .......
နောက်ပြီး virus scan ကသူ့စက်ထဲမှာမရှိဘူး....တင်လို့ကိုမရတော့တာ
တခါ restart လုပ်လိုက်ရင်တခါ ပိုပိုဆိုးတာပဲ...
နောက်တစ်ခုက my computer ကို open လိုက်ရင် Computer ထဲမှာရှိတဲ့ drive တွေကို harddisk ပုံလေးတွေနဲ့ ပုံလေးတွေရဲ့အောက်မှာ Local Disk(C) ,(D) စသဖြင့် ပြတယ်မို့လား အဲဒါ ပုံတွေပျောက်နေပြီး စာသားလေးတွေပဲ ကျန်ပြီး ဘာမှ နှိပ်မရတော့တာ လေ...
If your computer has been infected by virus, they try to prevent to install virus removal software. (:((:((
အချိန်ကြာလာတာရင် virus removal ကိုတင်လို ့မရတော.ဘူး။ :O:O:O
သူ့စက်က Internet လဲ မသုံး memory stick လဲ မသုံးပါဘူးတဲ့ ....:O:Oဖြစ်နိုင်ချေကတော့ ၀ယ်ကတည်းက...ဒါမှမဟုတ် CD ကပဲဖြစ်နိုင်တယ်.....:39:
အဲဒါနဲ့ မြန်မြန်ပဲ format ချပေးလိုက်ရတယ်....:106:
Hard Disk ကိုဖြုတ်တခြားစက်မှာတက်ပြီး Virus ရှာ။
ဒါမှမဟုတ် Live CD လိုဟာမျိုးနဲ့စက်ကို Boot တက်ပြီး Virus ရှာ System Repair လုပ်
software လည်းအတင်မခံတော့ဘူးဆိုရင် တခြား kaspersky daily update ......
Antivirus ကတော့ kaspersky ပဲသုံးဖြစ်တယ် ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုကောင်း
update မဖြစ်ရင်တောင်မှ virus ကိုတော့တွေ့တယ်...delete option ပဲမပါတာပါ...
တခါတလေ ဒီလိုတခြားစက်မှာ တပ်ပြီးစစ် တွေ့သမျှအကုန်သတ်လိုက်ပြီးကိုယ့်စက်မှာ...
ပြန်တက်ရင်တောင် ပုံမှန် window အခြေအနေ ပြန်မရတက်ဘူး........................
တင်လိုက်တာတော့ အကောင်ဆုံးပါပဲ...windows တင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုရင်တော့
သတ်ပြီးနည်းနည်းပါးပါး setting လေးတွေပြန်ရသလောက်ပြန်ပြင်ရတာပေါ့လေ.........